SomaliTalk.com » London
Home » Qoraallada Halkudhegga "London"
Bayaankii shirkii ARS ee London lagu qabtay
Bayaan Halkan ka daawo sawiradii shirka (London) Shirkii ugu horeeyey oo uga furmay Isbahaysiga dib-u-xoreynta Soomaaliyeed magaalada London, dalka Ingiriiska oo laba maalmood soconayey (18-19 Desember 2009) ayaa maanta soo gabagaboobey. Shirkan waxaa ka qayb galy qaar ka mid ah labda gole ee Isbahaysiga (Golaha Dhexe iyo kan Fulinta) oo aan kala raacin kooxihii ka baxay iyagu iskood uga baxay Isbahaysiga. Waxaa...
Madax horay uga tirsanayd TFG oo Booqasho ku tegey magalada London iyo warar kale
Xaflad casho lagu soo dhoweynayo madax horay uga tirsanayd TFG oo lagu qabtay magalada London. Halkan ka daawo sawiro dheeraad ah Xafladan oo ay soo qabanqabiyeen ururka Somali Peace Council (S.P.C) aya Kadhacday Makhaayada Blue Ocean ee Kutaal Xaafada shepherd bush Dadka lagu casumay xafladan ee martida ahaa waxaa ka mid ahaa wasirki hore ee arrimaha gudaha iyo amniga Maxamuud Ahmed Guuled Gacmo dheere...
Casho sharaf loogu sameeyay dadkii ka soo shaqeeyay cayaarihii Somali Week London Hotel Ramada Wembley
Halkan ka daawo sawiro dheeraad ah London 14/11/2009. Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu qabtey Hotelka Ramada oo ku yaal Galbeedka xaafada Wembley, xafladaas ayaa waxaa soo agaasimay maamulka cayaaraha Somali Week London 2009 islamarkaana casho sharaf u sameeyay dadkii gacanta weyn ka gaystey tartankii lagu qabtey magaalada London ee Somali Week London. Xaflada ugu horeyntii...
Festifaalka Soomaalida London | Goorma: November 13
Festifaalka Soomaalida London Warbaahin Saxaafadeed – London Goorma: November 13, 2009 Guddiga Qabanqaabada Festifaalka London ee Soomaalida wuxuu soo tebinayaa in dhacdada lagu shaacinayo barnaamijkaasi ay noqon doonto maalinta Jimcaha 13 Noofambar 2009, saacaddu 5ta ilaa 10ka fiidnimo, Goobta: Hampstead Town Hall Centre, 213 Haverstock Hill, London NW3 40P. Dad tiradoodu kor u dhaafayso 250...
Xaflad Lagu soo dhawaynayo Wafdiga Raisalwasaraha DFKS Sharmarke oo Kadhacday Magaalada London ( Daawo Sawiro)
VIDEO ka daawo halkan…. Cod ka dhegeyso halkan Jaaliyada Soomaalida magaalada London ku nool ayaa caawa xaflad qurux badan ugu qabatey Hall-ka Friends House oo ku yaal xaafada Euston wafdi balaaran oo u hogaaminaayo Raisal wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo booqasho sadax maalin ah ku soo gaarey dalka Ingiriiska. Xafladatan oo ay ka soo qayb galeen dad aad...
Cumar C/rashiid oo Booaqsho ku tegey London, UK
Cumar C/rashiid oo Booaqsho ku tegey London, UK Ahmed Elyas UK LONDON Waxaa October 26, 2009 magaalada London ee cariga ingiriiska safar shaqo ku soo gaaray goor danbe oo maanta (26/10/2009) ah wafdi sare oo uu hogaaminayo Ra’isulwasaaraha DFKM Somalia Dr. Omar A. A. Sharmarke oo ay ka mid yihiin wasiiro ka tirsan xukuumadiisa. inta uu joogo raisulwasaaraha Somalia magaalada London ee cariga...
Halkudheg: DFKMG, London